Yosef Huu sɛ Maria Anyinsɛn | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Japanese Jula Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Nigerian Pidgin Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
YOSEF HUU SƐ MARIA ANYINSƐN
YOSEF WAREE MARIA
Wobɛkae a, Maria nyinsɛnee foforo no ara na ɔkɔɔ ne busuani Elisabet nkyɛn wɔ Yudea kɔdii abosome mmiɛnsa. Maria san baa Nasaret no, na ne nyinsɛn no rekɔ abosome nnan. Ná ne yafunu no reyɛ apue ama obiara ahu sɛ ɔnyem. Hwɛ adwennwene kɛse a na abɛtɔ ne so!
Nea ɛhaw adwene koraa ne sɛ na Maria ne kapentani Yosef ayɛ nhyehyɛe a wɔrebɛware. Ná Maria nso nim sɛ Mmara a Onyankopɔn de maa Israelfo no kyerɛ sɛ, sɛ ɔbaa ne ɔbarima bi yɛ nhyehyɛe sɛ wɔbɛware na ɔbaa no ma kwan ma ɔbarima foforo ne no da a, saa ɔbaa no, ɛsɛ sɛ wɔsi no abo kum no. (Deuteronomium 22:​23, 24) Ná Maria nyɛɛ bɔne biara, nanso na ɔbɛka n’asɛm sɛn na Yosef ate no ase? Afei dɛn koraa na ɛbɛto no? Ná ayɛ asɛm sɛ!
Maria tuu kwan no, ɔkɔdii abosome mmiɛnsa, enti yɛbɛtumi aka sɛ na Yosef afe no paa. Maria bae no, ɛnyɛ dɛn ara a na ɔbɛka nea asi no ho asɛm na wakyerɛkyerɛ mu akyerɛ no sɛ Onyankopɔn honhom na ama wanyinsɛn. Nanso asɛm wei deɛ, hwan na ate bi da? Enti ɛbɛyɛ sɛ ansen Yosef tirim koraa.
Ná Yosef nim sɛ Maria yɛ ɔbaa pa, na ɔnyɛ basabasa. Ná ɔdɔ no paa, nanso Maria asɛm no yɛɛ no sɛ anansesɛm, efisɛ ɔbaa bɛyɛ dɛn anyinsɛn a ɔne ɔbarima renhyia mu? Yosef ampɛ sɛ wɔbɛsi Maria aboɔ akum no, na na ɔmpɛ nso sɛ ɔbɛgu n’anim ase. Enti ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛgyaa no a obiara nte ho asɛm. Wɔn bere so no, sɛ ɔbaa ne ɔbarima yɛ nhyehyɛe sɛ wɔbɛware a, na nkurɔfo bu wɔn sɛ awarefo, enti sɛ nhyehyɛe no bɛgu a, gye sɛ ɔbarima no hyɛ da gyaa ɔbaa no.
Akyiri yi, bere a Yosef da so ara redwennwene asɛm no ho no, ɔfaa mu dae. Yehowa bɔfo kasa kyerɛɛ no wɔ dae mu sɛ: “Nsuro sɛ wobɛfa wo yere Maria akɔ fie, na honhom kronkron na ama no anyinsɛn. Ɔbɛwo ɔbabarima, na ɛsɛ sɛ wɔto ne din Yesu, ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɛgye ne manfoɔ afiri wɔn bɔne mu.”​—Mateo 1:​20, 21.
Bere a Yosef sɔree no, hwɛ sɛnea n’ani bɛgye sɛ afei asɛm no mu ada hɔ! Ntɛm pa ara na ɔyɛɛ nea ɔbɔfo no kae no. Ɔde Maria kɔɔ ne fie. Wei yɛ ade a saa bere no, na wɔyɛ wɔ badwam. Ná ɛte sɛ ayeforo, na ɛmaa obiara huu sɛ afei Yosef ne Maria yɛ awarefo. Nanso, bere a Maria nyem Yesu no, Yosef ne no anna da.
Akyiri yi a Maria awoɔ reyɛ adu so no, ɛho bɛhiaa sɛ ɔne Yosef fi Nasaret a wɔte no kɔ baabi foforo. Saa bere a Maria regye nna awo yi, ɛhe na na wɔde wɔn ani bɛkyerɛ?
Bere a Yosef tee sɛ Maria anyinsɛn no, wohwɛ a dɛn na ɛbɛba Yosef tirim? Dɛn na ɛbɛma wanya saa ­adwene no?
Sɛ na Yosef nwaree Maria de a, ɛnde adɛn nti na na ɔpɛ sɛ ɔgyaa Maria?
Dɛn na Yosef yɛe a ɛmaa obiara huu sɛ waware Maria?